Izikole Zavulwa E-Istanbul, Akukho Siphithiphithi Sezimoto | RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulIzikole Zavulwa E-Istanbul, Akukho Siphithiphithi Sezimoto
09 / 09 / 2019 34 Istanbul, Izitimela zokuthutha, sesitimela, Funicular, JIKELELE, Highway, KENTİÇİ Rail Systems, Izinhlelo zeThire zeTrime, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, Metro, TURKEY, tram
izikole ezise-istanbul zivule ijam traffic
E-Istanbul, cishe abafundi abayizigidi ze-3 kanye nothisha abacishe babe yinkulungwane ye-200 benze ukuqala kwamakilasi namuhla. Edolobheni okukhona kulo izithuthi zomphakathi mahhala, kuhlinzekwa izimoto zokusiza ukuthwala abazali. Izakhamizi, uMongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu'nun ubiza ngokulalela izithuthi zomphakathi. Ngosuku lokuqala lwesikole, akubanga bikho zimoto zimbi noma ingozi e-Istanbul.
Ngenxa yokuvulwa kwezikole, i-Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), Ezokuphepha ne-Gendarmerie zisebenze ngokubambisana ukuthatha izinyathelo ezidingekayo zokuvikela ukunqwabelana kwezimoto e-Istanbul ngosuku lokuqala lonyaka omusha wesikole. Ngenxa yezinyathelo ezithathiwe kanye nezakhamizi zase-Istanbul zibheka ukusetshenziswa kwezokuhamba komphakathi nguMongameli we-IMM u-Ekrem İmamoğlu, akubanga nokuqina okungathi sína nokuphazamiseka kwezimoto. Kwabonakala ukuthi izakhamizi zithanda ukuthutha umphakathi mahhala.
I-08: Kusukela kwe-50, kukhona ukubumbana okuyingxenye lapho kuthathwa khona i-15 ngoJulayi Martyrs Bridge kanye noFatih Sultan Mehmet Bridge ekuguqukeni kusuka ohlangothini lwe-Anatolian kuye eYurophu. Emicimbini ka-Ashura Day eBahcelievler Halkalı Isikwele futhi esivaliwe sibheke emigwaqweni i-Fatih neZeynebiye ngenxa yobuncane bendawo yomgwaqo Press Press, amaqembu athathwa emigwaqweni yaseDereboyu naseMuammer Aksoy. Njengamanje, ubungako bethrafikhi e-Istanbul busezingeni le-40.
I-ISTANBUL TRAFFIC ilawulwa ngu-AKOM
Abaphathi be-IMM, Ohulumeni, Amaphoyisa, iGendarmerie, usuku lokuqala lwesikole luxhumanisa ukuhamba kwezimoto ezivela kwa-AKOM. Amakhamera aqapha ithrafikhi yasemadolobheni futhi amayunithi avinjiwe ayangeniswa ngokushesha amayunithi afanele. Amaphoyisa nethimba lamaphoyisa asebenza ngokubambisana emgwaqweni omkhulu nasezifundeni zezikole. Nezimoto ezihamba nge-EDS, amaqembu omphakathi enza ukuhlola emigwaqweni. UMnyango Wamaphoyisa Ezifundazwe i-47, iloli ye-IMM 19 tow ilungele ukuphendula ngokushesha ezingozini ezilimele ezingase zivele. Amapulatifomu emininingwane yethrafikhi yedijithali nezimpawu eziyisiyisi ezilengiswe emaphambukweni zisize abashayeli ekuhambeni kwetrafikhi.
Imoto yesevisi ye-17 bin service e-Istanbul ihlinzeka ukusetshenziswa kwezingadi zesikole ngesikhathi sokulayisha abafundi nokupaka. Igalaji lokupaka i118 SPARK elizungeze izikole linikeza insizakalo yamahhala ezimotweni ezisheshayo namuhla. Abazali abafuna ukuyisa izingane zabo esikoleni ngosuku lokuqala baphatha amabhasi ezikole. Imisebenzi iqediwe ezindaweni lapho kuzothinteka khona umgwaqo, noma umsebenzi umisiwe izinsuku eziningana ngenxa yokuvulwa kwezikole.
I-2 Istanbul Metropolitan kaMasipala isebenza cishe nezikhulu eziyinkulungwane zama-250 abasebenzi be-1500 abayizinkulungwane zomthetho kulo lonke elase-Istanbul. I-06 ekuseni: Izithuthi zomphakathi eziqala kusuka ku-00 mahhala kuze kube i-14: 00. Amabhasi, i-metrobus, uhlelo lesitimela nohambo lolwandle selukhulisiwe. IETT, ngenxa yokuvulwa kwezikole idlulise imali ekhokhwayo ebusika. Uhambo olwengeziwe lwe-4 eyinkulungwane lokuhamba nge-139, olutholwe ngebhasi, nge-metrobus, ngojantshi wesitimela nangolwandle, lwakha amandla abagibeli abengeziwe abayinkulungwane be-763. Amaqembu Esikole Esimele Amaphoyisa alungele zonke izinhlobo zezinkinga zokuphepha ezingase zivele ngaphambili nasekhaya.
Isemester yokuqala konyaka omusha wezifundo i-17 izophela ngoJanuwari 2020 ngoLwesihlanu. I-18-22 izobanjwa ngoNovemba, i-2019, bese i-20-31 izobanjwa ngoJanuwari 2020. Isemester yesibili i-3 izoqala ngoFebhuwari 2020 NgoMsombuluko kanti i-19 izophothulwa kusuka ngoJuni kuya ku-2020 ngoLwesihlanu.
Usuku lokuqala lwamakhompiki e-Akçaray aluzange lube nezinkinga
Isiteshi Sokuthutha I-Dalaman
Izikole zaba yiHoliday, iKonak Tram Line…
I-Mayor Tuna: "Vumela i-crossroads iphele ngaphambi kokuba izikole zivuleke"
I-Akçaray Tram Line iyakwandisa ezikoleni zezikole
Istanbul 'Technology Magazine' Tech Istanbul 'i-Inthanethi
Abesifazane Bafuna Inhlonipho Emgwaqweni
I-Sakarya Iyoba Yisibonelo Sedolobheni Ku-Traffic
I-3 Daily Balance Break Balance ku-Traffic 49 Efile, i-206 eyalimala
Izingane e-Alanya zixwayisa izakhamizi eziseTraffic
Izinguquko ezihlakaniphile zaqala ku-Traffic eSakarya
30 ukunciphisa isikhathi sokulinda ku-Traffic ku-Balıkesir
IScotty, 45 Million Spent e-Istanbul nge-Traffic…
Ukuqeqesha Ukuqwashisa Kwezokuthutha Kwabasebenzi base-Alanya Municipality
I-Era Entsha Kumagama Omgwaqo Aqala Ngokusemthethweni! Ibhuloho ...
Izakhamizi ze-Yahya Captain Zingafuni Umugqa weTram